Auto Belay Midziyo yeKukwira & Varaidzo | Yakakwana Yekukwira Kukwira Masystem
YAKAKOSHA DUPLEX SPRING DESIGN
Yakadzokororwa yekudzosera yakagadzirirwa kugadzikana uye hurefu
PD® Mutambi Sean McColl anogovera nyaya yake yeOlympic
Kuzadzisa yemhando yepamusoro kuyedza uye chitupa
Sangana nemumwe wako mutsva wekukwira
Yakakwana Yekuburuka Auto Belays yakavakwa nemaoko muUSA uye yakasimbiswa kune epamusoro mwero pasi. Inoratidzira ialuminium uye isina simbi-simbi yekunze kesi kuchengetedza chaiyo yepamusoro-kupfeka zvemukati zvikamu. Chiedza chakareruka uye chakaumbika, kuvimbika, uye mutengo wakaderera wemuridzi ndezvimwe zvezvikonzero nei PD® iri inodiwa auto belay pakukwiridzira nzvimbo, makambi, zvikoro nemayunivhesiti, pane ninja zvipingamupinyi makosi, uye kunzvimbo dzekuvaraidza dzemhuri. Kwayedzwa uye yakasimbiswa ku10x EN 341: 2011 Kirasi A., inomiririra yakanyanya yakazara zvitupa zvinodiwa kune yekuvaraidza auto belay zvishandiso.
Kwayedzwa kusvika 10x EN 341: 2011 Kirasi A uye inoratidzira yakasimba aruminiyamu uye isina simbi simbi yekunze ine chaiyo yepamusoro-yekupfeka zvinhu mukati.
Kudzoreredza kudzokorodza uine PD® yakasarudzika Duplex Chitubu Dhizaini ™ yakagadzirirwa kugadzikana uye hurefu.
Nyore kukwira, kufamba, uye kugadzirisa pa-kukwirira uye kudhura kutakura kuitira sevhisi uye kugadzirisazve.
KUSVIRA PASI PEDU KWEUCHAMWARI
Yekupinda nhanho yemutengo, yakaderera yepagore kudzosera mari, hapana yakavanzwa sevhisi yekubhadhara, uye zvinogara kwenguva refu zvinoreva hupenyu hwese kuchengetedza mari kune varidzi.
Inoshandiswa nezvikwata uye vatambi vepamusoro pasi rese uye yekutanga auto belay inoshandiswa mumakwikwi eWorld Cup, zvichitungamira mukufambira mberi kwakakosha mukukwikwidzana kuchengetedzeka uye kurongeka.
PAMUSORO & KUSHANDISA KUNZE
Ngura inodzivirira zvinhu uye dzimba dzakasimbiswa dzekuita kwakanakira mukati nekunze.
Kuvaka yakanakisa auto belay
Sarudza maitiro ako
Direct Dhiraivha ™
Mutungamiriri wemutengo mumhando yepamusoro uye yepamusoro-yekuita auto belays.
Inodzoka paavhareji mwero we2ft (61cm) pasekondi, ichiita sarudzo yakakodzera yekukwira kwese, nzira dzekudziya, nzvimbo dzekukwira dzevana, uye kukwira kwechiitiko.
Inoratidzira yedu yakasarudzika Duplex Chitubu Dhizaini ™ yakagadzirirwa kuvimbika uye kurarama kwenguva refu.
Yakavharidzirwa zvakakwana yekushandisa kwemukati nekunze.
Iyo yekutanga yekukurumidza-kudzoreredza auto belay inoisa muyero wehunhu uye kuita.
Kudzoreredza pamheni inokurumidza 15ft (4.6m) pasekondi, Speed ​​Drive ™ yakanakira kukwira nekukwikwidza, makwara ane simba, kudzidziswa kwepakati, uye nzira dzekusimba nematunhu.
Iyo Yepamutemo Auto Belay ye IFSC Yenyika Mukombe Kukwira uye inoratidzira yedu yakasarudzika Duplex Chitubu Dhizaini ™.
Sarudza yako Lanyard
PD® Auto Belays inopa matatu lanyard marefu akagadzirirwa kugadzirisa yako auto belay kuita kunoenderana nekukwira kukwirira. Gara uchisarudza lanyard iyo inonyatsoenderana neyakagadzirirwa kukwirira kukwirira nekuenzana kana kureba pakureba.
Kumusoro kukwirira pakati pe18ft uye 28.5ft (5.5m uye 8.7m)
Kumusoro kukwirira pakati pe26ft uye 40.5ft (8m uye 12.3m)
Kumusoro kukwirira pakati pe34ft uye 53.5ft (10.4m uye 16.3m)
Sarudza Maitiro Ekubatanidza
Simbi alloy, 3-danho auto-yekukiya carabiner ine yakasanganiswa swivel
Anodized aluminium, 3-nhanho auto-yekukiya carabiner ine yakasanganiswa swivel
Makwikwi uye Kuchengeteka
Maviri, matatu-nhanho auto-anokiya macarabiners ane sewn imbwa bone uye yakasanganiswa swivel
Yakazara simba rakasonerwa chiuno chakanakira kushandiswa nemhando dzakabvumirwa yekubatanidza
Shanu Nyeredzi Hunhu
Anodiwa nevatambi, varidzi vebhizinesi, uye vanofarira kukwira
Chigadzirwa chikuru kunyangwe zviri nani timu yekutsigira
Chigadzirwa chakakura kunyangwe zviri nani timu yekutsigira "Iyo Yakakwana Yekudzika auto belays inogara ichizadzisa zvandinoda uye vashandi veArial Adventure vanga vachindibatsira uye vachinyatsoziva pese pandinoda rutsigiro rwevatengi." Noah B. pa19 Aug 2020
Noah B. paAug 19, 2020
Kuburuka kwakakwana kuchaita kuti kuburuka kwako kuve kwakakwana
Yakakwirira Kwazvo Autobelay Inowanikwa. Zvakanyanya Kurudzira.
Mike L. musi waMay 9, 2019
Auto kurasa 2.0
Iyi ndiyo auto belay yeramangwana. Tinoda chigadzirwa.
Kellen D. muna Chikumi 19th, 2019
Iko kushandiswa kukuru kwechero kukwira gym!
Wonderfull mudziyo uye kushandiswa kwakatsetseka.
Maurice D. musi waMay 6, 2020
Iyi auto belay ndeye yemamirimita makumi maviri nemaviri madziro uye inoshanda kwazvo. Hapanazve kuda mumwe munhu kuti andibate! Inonzwa yakachengeteka uye yakavimbika uye yaive nyore kumisikidza zvinangwa zvangu. Ini ndakatenga yechipiri yeimwe chikamu chemadziro angu!
Steve W. musi waJanuary 28, 2020
Tenzi Yako Auto Belay Management Chirongwa
Bhalisa chigadzirwa chako
Chigadzirwa Kunyoresa chikamu chakakosha che auto belay manejimendi uye inogadzira yekutanga uye yakajeka rekodhi inoshandiswa mukati mehupenyu hwebasa hwechigadzirwa. Iva wekutanga kugamuchira yakakosha beta nezve zvigadzirwa zvinogadziridzwa, nhau uye zviitiko, technical bulletins, uye zvakasarudzika zvinopihwa.
Famba yedu yakazara yakazara yeChirungu neyekunze mutauro chigadzirwa uye mashandiro emabasa. Dhawunirodha magwaro azvino kwazvo eemhando 220 uye 230 auto belays, duplex chitubu ™ kuongorora uye lanyard kutsiva emanyorerwo, kuchenesa uye kuuraya utachiona mirairidzo, uye nezvimwe.
Wana zvakanyanya kubva kuchirongwa chako chePD® manejimendi neruzivo rwakapfupika uye rwakadzama nezve kuisirwa, kuchengetwa, uye mashandiro. Ongorora zvakajairika nzira dzekugadzirisa matambudziko, verenga kumusoro pane zvigadzirwa zvekuongorora zvinodiwa, uye uwane mirayiridzo yekugadzirisa makwikwi auto belays.
EN Maitiro anoisa bhaa yekuchengetedza chigadzirwa, kuvimbika, uye mhando. Yakakwana Yekutsika Auto Belays yakaedzwa uye yakasimbiswa kune yakanyanya mwero yekuvaraidza auto belays pa10x EN 341: 2011 Kirasi A. Tarisa uye utore iyo yazvino Declaration yeConformity uye Examination Chitupa.